देशुको साङ्गीतिक चाह::Milap News
देशुको साङ्गीतिक चाह
प्रवासमा रहेर नेपाली सङ्गीतमा लाग्ने सङ्गीतकर्मीमध्ये आफूलाई अग्रस्थानमा राख्दै आएकी छन् गायिका देशु गोलेले । गायनमा मात्रै नभएर आफूलाई गीत लेखनमा पनि उत्तिकै अग्रसर गराइरहेकी उनी बेलायतलाई कर्मथलो बनाएर नेपाली गीत–सङ्गीत तल्लीन छिन् ।
सङ्गीत भनेको साधना हो, गायनकला भगवान् सरस्वतीको सुन्दर वरदान हो र निरन्तर सङ्गीतको साधनाले नै हरेक गायक– गायिकालाई साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्थापित बनाउँछ, जसका लागि मिहिनेत, परिश्रम अनि अथक लगनशीलताको आवश्यक पर्छ । यसैको उदाहरण बनेकी छिन् गायिका देशु गोले ।
आमा लक्ष्मीकुमारी तामाङ र बुबा रामबहादुर तामाङको कोख बाट भोजपुर खाताम्छामा जन्मिएकी गायिका देशु गोले देशबाहिर रहेर आफ्नो दैनिक कामसँगै नेपाली गीत–सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि निरन्तर अगाडि बढिरहेकी छन् ।
साथीभाइ, आफन्त, शुभचिन्तकहरुको प्रेरणाबाट साङ्गीतिक यात्रा सुरू गरेकी गायिका देशुले विद्यालय पढ्दादेखि नै विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरुमा गाउँदै अन्य धेरै कार्यक्रमहरुमा आफ्नो गायन कला, क्षमता प्रदर्शन गर्दै आफ्नो गायन यात्रा सुरू गरेकी थिइन् ।
हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएकी देशु ‘सायद मलाई बनायो होला दैवले, यो दिलको राजा, तिमीसँग बोल्दैमा, मनैमा राखे तिमीलाई, कस्तो भाग्य को¥यौ दैव, कहिले पीडासँग’ जस्ता गीतले आफूलाई छुट्टै पहिचान दिलाएको दाबी गर्छिन् । ‘यी गीत अलिक बढी मन पराइएका छन् । यो बीचमा गीतका भिडियो पनि सार्वजनिक भए, जसलाई दर्शक÷स्रोताले औधी मन पराइदिनुभयो’, उनले भनिन् ।
सबै प्रकारका गीत गाउन मनपराउने उनी जस्तो अगाडि आइपर्छ, त्यस्ता सबै प्रकारका गीत गाउँछु भन्छिन् । ‘बढी आधुनिक गीतमा रमाउने गर्छु । रमाइलो गीत गाउने गर्छु । सबै गीत राम्रो लाग्छ मलाई,’ देशु भन्छिन् ।
दर्जनौं गीतहरुमा सुमधुर आवाज भरिसकेकी उनले आफ्नो लक्ष्य भनेको देशबाहिर रहेर पनि नेपाली गीत–सङ्गीतको श्रीवृद्धि नै रहेको बताउँछिन् । ‘गीत–सङ्गीत मेरो नसा–नसा अनि रगतमा छ, त्यही भएर नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर सङ्घर्ष गर्दैछु, सङ्गीतलाई सरस्वतीको प्रसाद सम्झिएकी छु,’ देशु भन्छिन्, ‘म आफूमा भएको कलालाई सधैं आफ्ना दर्शक–स्रोतामाझ समर्पित गर्नमा आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु ।’
पूर्वको पहाडी जिल्ला भोजपुरको खाताम्छा गाउँबाट हङकङ हुँदै बेलायत पुगेकी देशुको जीवनमा अनेक आरोह– अवरोह आए, जीवनका धेरै पानाहरु पल्टिए । यतिबेला भने उनी आफ्नो फरक प्रकृतिको गायकी शैलीबाट नेपाली गीत–सङ्गीतका पारखीहरुलाई आफ्ना क्रियशन पस्किन अझ जोडतोडले लागिपरेकी छन् । फरक प्रकृतिको कोमल गला भएकी देशुको गायकी शैली पनि भिन्न प्रकृतिकै अनुपम उपहारजस्तो रहेको छ ।
हामी जहाँ भए पनि आफ्नो पन, नेपाली मन, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाका अनि नेपाली गीत–सङ्गीतलाई सधैं संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर नेपाली गीत–सङ्गीतको श्रीवृद्धिमा लागेकी देशु गोलेलाई अझ थप साङ्गीतिक उडानका लागि शुभकामना । उनका नयाँ–नयाँ क्रियशनले नेपाली गीत–सङ्गीतको फाँट अझ फराकिलो होस् र उनलाई थप पहिचान मिलोस् ।
नेपाल बसाइँ कस्तो हुँदैछ  ?
म नेपाल आएको डेढ महिनाजति भयो । यो बीचमा मैले मेरा केही कामहरु, साङ्गीतिक कार्यहरु पूरा गरें । राम्रो भएको छ । सन्तोष पनि लागेको छ कामहरु पूरा भएकोमा । फेरि राम्रो–राम्रो मान्छे भेट्न पाएकी छु, राम्रो हुन्छ भन्ने आशा गरेकी छु । गीत– सङ्गीतप्रतिको मेरो लगाव, झुकाव र अभिन्न सम्बन्धले म राम्रो कुरामात्र सम्झिन चाहन्छु ।
कस्तो अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ  ?
गीत–सङ्गीतको लगाव, झुकाव र अभिन्न सम्बन्धले बेलायतको व्यस्तताबाट केही समय निकालेर यहाँ आएकी हुँ । यो बीचमा गीत तयार पार्ने क्रममा धेरै तीता–मीठा अनुभूतिहरु सँगालेकी छु । जे भए पनि मेरो नेपाली गीत–सङ्गीतप्रतिको लगावले अरू सामान्य कुराहरुलाई बिर्साइदिन्छ ।
कसरी आकर्षित हुनुभयो गीत–सङ्गीत क्षेत्रमा  ?
स्कुल पढ्दादेखि नै स्थानीय क्षेत्रमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा गीत गाउँथे । म सानो उमेरमै ब्रिटिस लाहुरेसँग वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएँ । विवाहपश्चात्को छोटो समयममा नै श्रीमान् ब्रिटिस गोर्खाको जागिरतिर लागेपछि त्यही एक्लोपनको विरहबाट गीतिलेखनमा लागेकी हुँ । एक्लोपनको वह पोख्दापोख्दै त्यही बेला मैले धेरै गीत रचना गरेकी थिएँ । पछिल्लो समय म रचना सँगसँगै गायनमा पनि सक्रिय हुँदै आएकी हुँ ।
यो बीचमा कति गीत यहाँका रेकर्ड भए ? भर्खर भिडियो पनि स्रोतामाझ ल्याउनुभएको छ । कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ प्रतिक्रिया  ?
हालसम्म मैले एक दर्जनभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराएँ । ‘सायद मलाई बनायो होला दैवले, यो दिलको राजा, तिमीसँग बोल्दैमा, मनैमा राखें तिमीलाई, कस्तो भाग्य को¥यौ दैव, कहिले पीडासँग’जस्ता गीतले मेरो परिचय दिलाएका छन् जस्तो लाग्छ । यी गीत अलिक बढी मन पराइएका छन् । यो बीचमा एउटा गीतको भिडियो पनि सार्वजनिक भयो । राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेकी छु ।
कस्ता गीत गाउन बढी मनपराउनुहुन्छ  ?
म सबैप्रकारका गीत गाउन मनपराउँछु । जस्तो अगाडि आइपर्छ, त्यस्तै सबै प्रकारका गीत गाउँछु । बढी आधुनिक गीतमा रमाउने गर्छु । रमाइलो गीत गाउने गर्छु । सबै गीत राम्रो लाग्छ मलाई । मैले राज सिग्देलसँग गाएको गीत ‘सायद मलाई बनाए होलान्…’ धेरैले मन पराइदिनु भयो । त्यस्तै ‘तिमीसँगै बोल्दैमा…’लाई पनि औधी मन पराइयो । यी दुवै गीतमा अर्जुन पोखरलेको सङ्गीत रहेको छ । मेरा प्रायः गीतहरुले वियोगान्त शैलीलाई पछ्याएको भए पनि रोमान्टिक शैलीमा म त्यतिकै सक्रिय छु लेखन र गायनमा ।
विदेशमा बस्नुहुन्छ, व्यस्त जीवनका बीचमा पनि गीत–सङ्गीतमा त्यत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ, समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ  ?
समय मिलाउन एकदमै गाह्रो छ । घर–व्यवहार पनि मिलाउनुपर्छ । म घरको महिला सदस्य मात्रै नभएर अभिभावक नै हुँ । मेरो शिरमा धेरै कुराको भार छ । फेरि इच्छाशक्तिको कुरा हो भन्ने लाग्छ ।
पारिवारिक सर्पोट कत्तिको पाउनुभएको छ  ?
परिवारबाट एकदमै सर्पोट पाएकी छु । खासगरी मेरा श्रीमान् पदम थिङज्यूले मेरा हरेक क्रियाकलापमा साथ–सहयोग दिइरहनुभएको छ । हौसला दिनुभएको छ । उहाँकै उत्प्रेरणाले अझ मलाई यस क्षेत्रमा सक्रिय हुनका लागि बल मिलेको छ ।
मिलापमार्फत् मेरो व्यक्तिगत केही कुरा र मेरो गीत–सङ्गीतका पाटोका केही कुरा पस्किने मौका दिनुभएकोमा तपाईंहरुको सम्पूर्ण टिम विशेषगरी तपाईं गीताजीलाई धन्यवाद । जहाँ भए पनि नेपाली पन, नेपाली गीत–सङ्गीतलाई माया गरौं । हाम्रा गीत–सङ्गीत, हाम्रो वेशभुषा, भाषा, कला र संस्कृति नै हाम्रो पहिचान हो । यसलाई जर्गेना गर्ने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने तपाईं–हामी सबैको कतव्र्य हो ।